रिडी–रुद्रबेणी–वामीटक्सार सडकखण्ड अन्तर्गत ५ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सुरु – ebaglung.com
२०७४ बैशाख २०, बुधबार १४:५९	Top News, थप समाचार
अनिश शर्मा गैरे, वामी गुल्मी, २०७४ बैशाख २० । रिडी–रुद्रबेणी–वामीटक्सार सडकखण्ड अन्तर्गत ५ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा नादेयाखोला देखी उल्लीखोला सम्मको करिब ५ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सुरु भएको हो । सडक कालोपत्रेको जिम्मा रसुवा ए.बि.ए. जे.बि. काठमाण्डौले लिएर काम गरिरहेको छ । नादेयाखोला भन्दा अगाडी रीडि सम्मको कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी कालीगण्डगी कोरिडोरको भएको उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज लम्सालले जानकारी दिए ।
उक्त सडकको स्तरोन्नती सँगै कालोपत्रे गर्नको लागि ४८ करोड ७३ लाख बजेट बिनियोजन भएको गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद चन्द्र भण्डारीले बताए । उनले उक्त सडक पश्चिम भेगकै ब्यस्त भएको हुनाले र यो क्षेत्रका स्थानीयहरुले लामो समयदेखी दुख पाइरहेको हुनाले यसरी बजेट बिनियोजन भएको जानकारी दिए ।
३६ किलोमिटर रहेको यो सडकको स्तरोन्नतीको कामको कुराहरु बर्षाै पहिलेबाट सुरु भए पनि धेरै समयपछि काम सुरु भएको छ । सडक फराकिलो बनाउने तथा अन्य ब्यबस्थापकीय काम पनि धमाधम भइरहेको देखिन्छ ।
वामीसम्म नै सडक स्तरोन्नतीको लागि काम भइरहेको देख्न सकिन्छ । रीडि देखी वामी सम्मको पुरै सडक कालोपत्रे भयो भने यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले राहातको अनुभुती गर्न सक्नेछन ।
साताको तस्वीर : आकाशबाट बागलुङ !